Job vacancy muDhailand yeIndia - Isa pamwe neTime yedu!
Job Job vacancy in Dubai for Indian
Yakabudiswa na Dubai City Company at November 13, 2018
Job vacancy in Dubai nokuti muIndiya ne Dubai City Company. Mazano edu emabasa ari kubatsira vanotsvaka basa reIndia. Donzvo redu ndere kuvabatsira kusvika pamusika webasa. Dubai City kambani kubudirira kuiswa zviuru zvevatsvaga basa. Uye isu tinoziva nzira yekuvabatsira. Kunyanya maitiro ekutamira kuUnited Arab Emirates. Employment vacancies mu Dubai kana Abu Dhabi. Inowanikwa pachena kune vatungamiri veIndia uye vadzidzi vatsva vakapedza kudzidza. Saka, zvisinei kuti chii chaunoziva iwe. Unogona inoshanda kushanda muEmirates.
Uye zvechokwadi, iwe unogona kuzviita nedu timu yenyanzvi. Uye vedu HR vatungamiri ichakutungamirira kubasa kune dzimwe nyika. Saka iwe unongonetseka chete, nei ndisina kuwana iyi websaiti yekare? Saka, Kazhinji kutaura, edza ku kuwana zvakawanda sezvaunogona kubva panzvimbo yedu yebasa. Uye uine izvi mupfungwa, tarisa zvedu Blog. Wobva waisa pane rondedzero yevakagadziridza vanyori uye yevashandi portals. Uye isu tine tariro iwe uchawana Nyaya dzinofarira uye dzinokurudzira.
Saka, kana uri kutarisa nokuda kwebasa mu Dubai semunhu weIndia, iwe unofanirwa kunyoresa chimiro chako nekambani yedu. Wobva wawana vanhu vazhinji kuti ubatane navo uye utaure navo nezve Mubatanidzwa Arabhu Emeretsi. Kazhinji, iyo nzira yakanakisisa somunhu weIndia ndeyekubatana nevamwe vaIndia. Uye izvi zvichakubatsira kubudirira kubudirira mararamiro ako ekutora maitiro.
Dzvanya pamufananidzo kuti utange ne Dubai Company
Dubai City Company izvozvi kupa gwara rakanaka & zvidimbu zvemashoko eDubai Basa. Dare redu rakasarudza kuwedzera ruzivo rwemutauro mumwe nomumwe wedu Dubai expats. Nekudaro, uine izvi mupfungwa, iwe unogona ikozvino kuwana magiragi, matipi uye basa muUnited Arab Emirates nemutauro wako.